मध्यभोटेकोशीको ९० करोडको आईपीओ बाँडफाँडको तयारी - Arthik Sandesh मध्यभोटेकोशीको ९० करोडको आईपीओ बाँडफाँडको तयारी - Arthik Sandesh
मध्यभोटेकोशीको ९० करोडको आईपीओ बाँडफाँडको तयारी
काठमाडां–मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ आगामी साताभित्रै बाँडफाँड हुने भएको छ । मध्यभोटेकोशी जलविद्युतका सीईओ रामगोपाल शिवाकोटीका अनुसार आगामी साताभित्रै आईपीओ बाँडफाँड गर्ने गरी धमाधम काम भइरहेको छ ।
मध्यभोटेकोशीले कम्पनीले गत आसोज २० गतेबाट कुल ९० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। कुल निष्कासन हुने कित्तामध्ये ३ लाख ६० हजार कित्ता (४ प्रतिशत) कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ४ लाख ५० हजार कित्ता (५ प्रतिशत) सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको ८१ लाख ९० हजार कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन पेस गरेका छन्।
आईपीओमा २३ लाख ९३ हजार ४२८ आवेदकले ३ करोड ४३ लाख ६० हजार १० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले यो आईपीओ पनि गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड हुनेछ । यसअघि कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका आयोजना प्रभावित र जिल्लाकै अन्य क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कुल ६० लाख कित्ता निष्कासन गरेर बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ।
मध्य भोटेकोशीको आईपीओको सहनिष्कासनकर्तामा एनआईबिएल एस क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट, सिभिल क्यापिटल मार्केट, सानिमा क्यापिटल र सीबीआईएल क्यापिटल रहेका छन्।
साढे ६२ करोडको नयाँ आईपीओ निष्कासन हुने
काठमाडौं–५२.४ मेगावाटको विद्युत् परियोजना निर्माण गरेको ग्रिन भेन्चर कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । ग्रिनभेन्चरले ६२ करोड ५० लाख रुपियाँको आईपीओ न...
एक दर्जन जलविद्युतको लाभांश घोषणा, कसको कति ?
काठमाडौं–विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिरहेका बेला जलविद्युत् कम्पनीले पनि धमाधम लाभांश घोषणा गरेका छन् । नेप्सेमा सूच...
मध्य भोटेकोशीको शेयर मूल्य ८ सय सम्म पुग्ने अनुमान,कहिले होला कारोबार ?
काठमाडौं - केही समयअघि प्राथमिक शेयर निष्कासन गरी बाँडफाँट गरेको मध्य भोटेकोशीको आइपीओ दोस्रो बजारमा कहिले कारोबार होला भन्ने धेरैको चासो रहेको छ ।
चुनाव समयमै गर्ने गठबन्धनको निर्णय,शेयर लगानीकर्ता उत्साहित